Ifulethi elinechibi langaphandle/i-hydromasaz PRIVATE
Kissamos , Chania, i-Greece
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Elina
Le Apartment iyifulethi elinethezekile eliphansi elinegumbi elilodwa lokulala elinombhede omusha we-Coco Mat, ikhishi, igumbi lokuhlala, ithala elizimele le-balcony kanye ne-PRIVATE Jacuzzi/pool. Ekamelweni lokuphumula kunombhede wosofa oyibhinki otholakala ezihambelini ezimbili ezengeziwe. Ulwandle luphakathi kwemizuzu emi-2. ibanga lokuhamba.
Ukudla kwasekuseni akufakiwe kulokhu kubhuka kodwa ungakhetha lapho ufika. Isidlo sasekuseni senzelwe isivakashi ngasinye uma siceliwe futhi sisiphakela ekamelweni noma ngaphandle engadini.
Uma ubuka ukushona kwelanga futhi ulele ogwini lolwandle e-Falassarna, e-Balos noma e-Elafonisi kunzima kakhulu ukushiya indawo enhle kangaka. Kodwa uma ikhaya elimnandi nelibukekayo likulindile, akunzima kangako!
Lena indawo esitshale uthando lwethu emvelweni futhi samukela wonke umuntu ofuna ukuhlala. Iningi lezivakashi zethu lifisa ukuthi zingahlala ngaphezulu. Bathola indawo yethu iyinhle futhi bathanda umhlobiso wethu okhethekile ‘esiwubeke kuwo, okwenza indawo ekahle kuwe ezokwamukela futhi inikeze izidingo zakho zamaholide. Sinikeza umzamo omkhulu wokukunikeza izindawo ezihlanzekile, zokunethezeka neziphumulele ngaphakathi emakamelweni nasezindaweni ezingaphandle. Lapha UZIZWA NJENGEKHAYA LAngempela.
Mina, umyeni wami uGeorge nendodakazi yethu encane sikulungele ukwamukela futhi sikusize. Sizokumangaza ngamafutha ethu omnqumo, iwayini noju futhi uma kungenzeka ngezithelo nemifino (kuye ngokuthi inkathi). Uzolithanda izwe lakithi, ulwandle oluhlanzekile nolushisayo, ukudla okuhle kakhulu, umoya wokungenisa izihambi, abantu, ubugwadule bezintaba. Uzozizwa izinsuku nobusuku bokuphumula okuphelele okukuvumela ukuba ubalekele empilweni yansuku zonke futhi uzwe impilo yangempela ye-cretan.
Ngokuvamile, sihlala endaweni eyinkimbinkimbi ehlanganisa amafulethi amabili nendlu yethu engaphansi, nezitudiyo eziyisithupha esitezi sokuqala, zonke zinefenisha ngokugcwele futhi zizimele. Ngesikhathi sokuhlala kwakho sikuhlinzeka ngakho konke okudingayo ukuze ulungise ukudla kwakho kwasekuseni nokudla kwakho kanye ne-A/C, i-Wi-Fi, i-BBQ nendawo yokupaka. Indawo yethu isendaweni edume ngobuhle bayo bemvelo, ingxenye yentshonalanga yeKrethe, eKissamos, eduze kwegalofu elimangalisayo laseKissamos, eMavros Molos Beach.
Ngokushesha nje lapho ufika esiqhingini ngesikebhe noma ngendiza futhi ngisho nangaphambi kokuba unyathele esiqhingini uthola ukuphefumula umoya ohlukile. Abaningi bakholelwa ngempela ukuthi iKrethe isengenye yezimangaliso ezimangalisayo zemvelo. Eqinisweni, isiqhingi ngokuhambisana nekhwalithi yolwandle nolwandle kanye nokungenisa izihambi kwe-cretan kwenza abantu bafune ukuza ngokuphindaphindiwe ngoba ukuvakasha ngakunye akwanele. Uma kwenzeka endaweni yaseKissamos ubuhle bemvelo, ulwandle nolwandle, umlando kanye nokudla okumnandi kwaseMedithera okubiza yonke into!
I-Crete iyisiqhingi esikhulu kunazo zonke samaGreki esigcina izici zamasiko endawo (ulimi lwesigodi, izinkondlo nomculo). Indawo yaseKissamos ihlanganisa amanzi acwebezelayo aluhlaza, izimpushana namabhishi, amabhishi amancane angaqondakali azohlukaniswa futhi abekwe ngaphansi kwelanga eliphelele, imibala emangalisayo nxazonke. I-Kissamos iyindawo ekahle yamasu kanye nezwe elikahle ongahlala kulo ngoba ikunikeza ithuba lokuvakashela amabhishi e-cretan aphuphayo njenge-Balos, i-Falassarna, i-Elafonisi nobuhle bemvelo obuyingqayizivele njenge-Samaria Gorge, kuyilapho ujwayele enye yempucuko yasendulo futhi enempilo kakhulu. ukudla.
Ngamagama ambalwa iKrethe isho ukuthi:
Iminyaka eyizinkulungwane eziyisishiyagalombili yomlando!!! Kuyisikhungo sempucuko yamaMinoan, impucuko yokuqala yezinga eliphezulu eYurophu, ehlanganisa izigodlo zokuqala eYurophu, izwe lase-Ikaros neMinos, ikhaya lika-El Greco, Kazantzakis kanye neVenizelos. I-Crete itholakala phakathi kweMpumalanga, iNtshonalanga kanye neNingizimu, igcwele izihlahla zomnqumo, amawolintshi nezivini. ICrete inamahlathi esundu adumile (eVai nasePreveli) kanye namahlathi omsedari (eGavdos naseChryssi). Kuyisiqhingi esigcwele ukuqhathanisa, ipharadesi lalabo abathanda amabhishi angawodwa. I-Crete inothando, nolwandle lwayo, amadwala namathafa acwebezelayo, anephunga elimnandi le-fennel yasendle kanye ne-basil entsha ... I-CRETE inakho konke!
4.89 ·38 okushiwo abanye
Izindawo zokudlela, ikhefi, imakethe enkulu kanye nesitobhi sebhasi kungakapheli imizuzu emi-5 ukuhamba.
UElina Ungumbungazi ovelele